ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက် တိုက်ပွဲသတင်းစုစည်းဖော်ပြမှု – PVTV Myanmar
ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက် တိုက်ပွဲသတင်းစုစည်းဖော်ပြမှု
⚠️မကွေးတိုင်း ဆိတ်ဖြူမြို့နယ် ရှားလှရွာတွင် တပ်စွဲထားသော အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ တပ်ဖွဲ့များကို Southern Pauk People’s Defense Force (SPPDF) တပ်ဖွဲ့က ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ရက်၊၃ရက်နှင့် ၄ရက်နေ့တို့တွင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး စစ်သား ၇ဦးသေဆုံးကာ စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးထားသည့် ပြည်သူ ၁ဝဝကျော်ကိုလည်း ပြန်လည် ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း SPPDF တပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ ဆိတ်ဖြူမြို့နယ် ရှားလှရွာကို အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ တပ်ဖွဲ့များက ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်း၌ သေနတ်များ ပစ်ဖောက်ကာ ကျေးရွာကို စီးနင်းခဲ့ပြီး ပြည်သူ ၁ဝဝကျော်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်း စစ်ကောင်စီ တပ်ဖွဲ့များကို SPPDF တပ်ဖွဲ့က ၂ရက်နေ့တွင် လက်နက်ကြီးဖြင့် ၄ကြိမ် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
⚠️ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ရက်နေ့ SPPDF တပ်ဖွဲ့များက စစ်ကောင်စီ တပ်စွဲထားသော ကျေးရွာအတွင်းသို့ နံနက်ပိုင်းနှင့် ညနေပိုင်းများတွင် ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခိုက်ခဲ့ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ရက်နေ့တွင် ယင်း စစ်ကောင်စီ စစ်ကြောင်းကို ထပ်မံမိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး စစ်သား ၇ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ယင်းသို့ မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက် ရှားလှရွာအတွင်း စစ်ကောင်စီ တပ်ဖွဲ့များ ဖမ်းဆီးထားသည့် ပြည်သူ ၁ဝဝကျော်ကို Southern Pauk People’s Defense Force (SPPDF) တပ်ဖွဲ့က ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းပါ။
⚠️စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကလေးမြို့နယ်နယ်တွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်နေ့ ည ၇ နာရီခွဲအ ချိန် ပြင်သာစာသင်ကျောင်းတွင် တပ်စွဲထားသော စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့က ဝင်ရောက် ပစ်ခတ်ရာ စစ်ကောင်စီဘက်မှ ဗိုလ်ကြီး ၁ ဦး အပါအဝင် ၁၂ ဦးသေဆုံးပြီး PDF ဘက်မှ ၇ ဦးကျဆုံးကြောင်း ကလေးမြို့ နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့ ည ၇ နာရီခွဲအချိန် ပြင်သာစာသင်းကျောင်းတွင် တပ်စွဲထားသော စစ်ကောင်စီတပ်ကို ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ တပ်ရင်း ၆ နှင့် ၇ က ဝင်တိုက်ခိုက်ကြောင်း၊ ပြင်သာစာသင်ကျောင်း အခန်းထဲတွင် ထိုင်နေသည့် ပျူစောထီးအဖွဲ့နှင့် စစ်သား ၄ ဦးကို လက်ပစ်ဗုံးဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာ အားလုံး သေဆုံးကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
နှစ်ဖက် အနီးကပ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီး ကနဦး အကာအကွယ်မယူမီ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှ ပြင်သာသား တပ်ရင်း ၆ တပ်စုမှူးတစ်ယောက်ကျဆုံးသွားကြောင်း၊ အနီးကပ်တိုက်ပွဲဖြစ်သဖြင့် ကိုယ့်လူသူ့လူရောသွားကြောင်း၊ တပ်ရင်း ၆ မှတပ်သား ၃ယောက်နှင့် တပ်ရင်း ၇ မှ တပ်သား ၃ ယောက် စုစု ပေါင်း ၇ ဦး ကျဆုံးခဲ့ရတာပါ။ စစ်တပ်တပ်စွဲထားသော ပြင်သာစာသင်ကျောင်းကို တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား ၅၀ ဖြင့် အနီးကပ်ဝင်လုံးပြီးတိုက်ခိုက်ကြခြင်းဖြစ်ပြီး အနီးကပ် အပြန်အလှန် ပစ် ခတ် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကြောင်း ၊ ပြင်သာစာသင်ကျောင်းဝန်းထဲတွင် PDF တပ်ခွဲမှူးက စစ်တပ်ဗိုလ်ကြီးကိုသေနတ်ဖြင့် တေ့ပစ်သတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ သေဆုံးသွားသော ဗိုလ်ကြီးမှာ ကလေးမြို့ခံဖြစ်ပြီး ကလေးမြို့ညောင်ပင်သာရပ်ကွက်၊ဘုရား ၃ ဆူမှ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းတိုက်ပွဲတွင် အဆိုပါ ဗိုလ်ကြီး အပါအဝင် ၁၂ယောက်သေဆုံးကြောင်း၊ သေဆုံးသူများ၏ အလောင်းများကို ကလေးမြို့သို့ တင်ဆောင်သွားပြီး ကျဆုံး PDF ၇ ဦး၏ အလောင်းကို ပြင်သာစာသင်ကျောင်းတွင်ပင် ထားရှိကာ ရွာသူရွာသားများကို မဖြစ်မနေ မလာမနေရ ခေါ်ယူ ကြည့်ရှုခိင်းကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
⚠️အလားတူ ကလေးမြို့ တောင်အူကျေးရွာဘက်တွင်လည်း တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှ ၁၈ ယောက် ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း၊ ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ ၄၀ မိနစ်အချိန်ဝန်းကျင် စစ်ကောင်စီတပ်အင်အား ၈၀ ခန့် စည်သာဘောလုံးကွင်းတွင် ရောက်ရှိ တပ်စွဲထားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
⚠️မကွေးတိုင်း၊ လောင်းရှည်မြို့ပေါ်ရှိ စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့ ဝင်တိုက်ခိုက်ပြီး စစ်ကောင်စီဘက်မှ ဗိုလ်တစ်ဦးနှင့် စစ်သားတစ်ဦး သေဆုံးကြောင်း YDF(Saw&Kyaukhtu) က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ (၄) ရက်နေ့ နံနက် (၄) နာရီခွဲ အချိန်ခန့်တွင် PDF – Saw, YDF (Saw&Kyaukhtu) ပူးပေါင်းအဖွဲ့များ ဆောမြို့တွင်းရှိ အရာရှိများတပ်စွဲထားရာနေရာနှင့် စစ်ကောင်စီ ဒေါက်တိုင်များအား တိုက်ခိုက်ချိန် PDF – Laung She (LRPDF) နှင့် YDF(Saw&Kyaukhtu) ပူးပေါင်းအဖွဲ့များကလည်း လောင်းရှည်မြို့ မီးသတ်ကုန်းတွင် တပ်စွဲထားသောစစ်ကောင်စီတပ်ကို ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း၊ တိုက်ပွဲမှာ (၂) နာရီခန့် ပြင်းထန်ခဲ့ပြီး စကစ ဘက်မှ ၂ ပွင့်ဗိုလ်တစ်ဦးနဲ့ တပ်သား တစ်ဦး ကျဆုံးခဲ့ကြောင်း YDF(Saw&Kyaukhtu) က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
စစ်ကောင်စီက လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သောကြောင့် ဒေသခံပြည်သူ ကျဆုံးမှုရှိပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှုများလည်း ရှိကြောင်း၊ ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှု မရှိကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
⚠️အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ပြည်ထဲရေးနဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ် သတင်းအချက်အလက်များ⚠️
အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ ပြည်သူလူထုအပေါ် အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖမ်းဆီးတိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်နေ မှုများကို ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးက အသက်ရှင်သန်ရေးအတွက် မိမိကိုယ်ကိုယ်ကိုမိမိ ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရ၊ ပြည်သူ့ခုခံစစ် (Peoples Defensive War) ကို ဆင်နွှဲလျက်ရှိပါတယ်။
သတင်းအချက်အလက်များအရ(၄. ၂. ၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင်
စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် ၆၃ဦး သေဆုံးပြီး
CDM စစ်သားကို ချင်းအမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ်/ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် (CNO/CNDF) က ကျပ်သိန်း ၅၀ ချီးမြှင့်
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့အကြား ရေတာရှည်မြို့နယ်အတွင်းမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်
“NUGPay ဝန်ဆောင်မှုတွေ အကြောင်း အကုန်သိစေမယ့် NUGPay စွယ်စုံကျမ်း လာပါပြီ”
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက CDM တွေကို ဖိနှိပ်မှုပြုလုပ်နေတဲ့ Non CDM ဝန်ထမ်းအရာရှိ ၃၅ ဦးကို အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းပြီး ရာထူးကထုတ်ပယ်
Radio NUG – 5th February , 2022 Evening